Wednesday September 05, 2018 - 19:54:09 in Wararka by Super Admin
Maamulka Yuhuuda ayaa markii ugu horreeyey ka dhawaajiyey in 200 oo weerar oo dhanka cirka ah ay ka fuliyeen gudaha wadanka Suuriya labadii sano ee lasoo dhaafay.
Wasiirka Sirdoonka maamulka Yuhuuda Ninka lagu Israel Katiez ayaa shaaciyey in ciidankooda cirka ay gudaha suuriya ku beegsadeen, qaar kamid ah kooxaha mucaaradka iyo Maleshiyaadka Shiicada ah ee taageerada ka hela dowlada Iiraan, ugu yaraana halkii isbuucna ay laba weerar ka fuliyaan gudaha wadanka Suurya.
Waxa uu tilmaamay in duqeynta labada boqol ah ee ay ka fuliyeen gudaha suuriya ay u isticmaaleen wax ka badan 800 oo Gantaal, oo isugu jira kuwa wax burburiya iyo kuwa kadusa dhismooyinka Shubka ah ee lagu keydiyo Hubka iyo wixii lamid ah, sidoo kalena ay jiraan weeraro loo adeegsaday ikhtiraaq lagu sameeyey qalab isgaarsiined iyo Kumbiyuuterro inkastoo uusan shaacin qaabka ay yihiin.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in duqeymaha ay ka fuliyeen gudaha wadanka Suuriya ay ka qeyb qaateen in ay hor istaagaan hubkii ay dowladda iiraan isaga kala gudbin jirtay wadamada Lubnaan iyo Suuriya, iyo Hubkii ay iiraan siin jirtay Maleeshiyaadka shiicada ah ee isku magacaabay Xizbulaah ee uu hogaamiyo Xasan Nasrulllah.
Tiro dhowr jeer ah ayay diyaaradaha dagaalka Yuhuudda weeraro ka fuliyeen gudaha wadanka Suuriya, iyagoo beegsanaya bakhaaro lagu keydiyo Hub oo ay leeyihiin ciidanka Nuseyriyada Nidaamka Bishaar Al-Asad iyo Maleshiyaadka Shiicadaha ah ee Iiraaniyiinta ah iyo Garoomo Military oo kukala yaala dhamaan gobolada kala duwan ee wadanka Suuriya.
Duqeynti ugu danbeysay oo ay fuliyaan diyaaradaha dagalka Yuhuuda ayaa ka dhacday 2 maalin kahor garoonka Militariga Mezza iyo xarun cilmi baaris oo labaduba kuyaala daafaha magaalada caasimada ah ee Dimishiq.
Arinka cusub ee hadalka Wasiirka lagala dhex baxayo ayaa ah in Maamulka Yuhuda u ku lug leeyahay duqeymaha lagu baabi’inayo shacabka Musliminta ah ee wadanka suurya ee ka dhacayo deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxaha mucaaradka ah ee dagaalka kula jiro Nidaamka Dhiigya cabka ah ee Bishar Al-Asad.
Yasrael Katiez ayaa marki ugu horeeysay ka dhawaajiyey in ku dhawaad Kun qof ay ku dileen duqeymo ay ka geysteen deegaanada ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaradka Suurya ee dhaca galbeedka iyo woqooyiga wadanka Suurya, inkastoo uusan faahfaahin cida ay sida tooska ah ula beegsadeen duqeymahaasi.
Dhanka wadanka yemena Maleshiyadka Xuuthiyinta ayaa shaaciyey in ilaa 4 Gantaal oo Balist ah ay la beegsadeen qeybo kamid ah gobolada koofureed ee wadanka Sucuudiga iyo xarumo ay leedahay shirkada Aramco ee shidaalka soo saarta.
Tvga Al-masiira ee kuhadlo afka maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ayaa baahiyey in 4 gantaal oo noocooda uu ku sheegay Badar1 ay ku garaaceen xarumaha shirkada soo saarto Shidaalka ee Aramco ee ku yaala gobolka Jazan oo dhaca koofurta wadanka Sucuudiga.
Lama soo sheegin khasaare ay geysteen gantaalada ay Xuthiyintu ku garaaceen gobolka Jaazaan, balse isbaheysiga wadamada Carabta ayaa shaaciyey in ciidankooda difaaca uu ka hor tagay, ilaa laba gantaal oo ahaa kuwa ridada dheer oo lagasoo reeday dhanka gobolka Sacda oo dhaca woqooyiga dalka Yemen, ayna ku burburiyeen hawada sare, kahor intii aysan gaarin ahdaaftii loogu tala galay.
Beegsashada Xuuthiyiinta ee gobolka Jaazaan ayaa imaaneyso xilli laba maalin ka hor warbaahinta ku hadasha afka maamulka Ala Sucuud ay ka dhawaajisay in dagaalo ka dhacay xuduud beenaadka ay wadaagaan Yemen iyo Sucuudiga lagu dilay ilaa 8 katirsan ciidanka Sucuudiga, kadib iska hor imaadyo halkaas ku dhex maray labada dhinac.